नेकपा फुटाएर कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिने ओलीको प्रस्ताव ? - Media Dabali
केपी ओलीमाथि ठूलै कारवाहीको तयारी, यस्तो भयो निर्णय
बल्ल खुल्यो संसद विघटनको गोप्य रहस्य ! केपी ओलीको यस्तो भित्रि चाहना
काठमाडौं - हिजो शनिबार नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा लामो छलफल भयो। संवैधानिक रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल गर्न बूढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासँग सत्ता साझेदारीको विषयमा कुरा गरेको सार्वजनिक भएको छ।
नेकपामा विवाद बढेसँगै पार्टी फुटको संघारमा छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले ओलीलाई एक्ल्याउन खोजेपछि ओलीले पार्टी फुटाउने तयारी थालेका हुन्।
उनले पार्टी फुटाएको खण्डमा सत्ता साझेदारी गर्न कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेका हुन्। ओलीको प्रस्तावमा देउवाले छलफल गरेर जवाफ दिने बताएको बुझिएको छ। ओलीले देउवालाई आठ वटा मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन तयार रहेको पनि बताएको छ।